ECHIMECHI N’ALA IGBO I | Igboniile
Ọzọ bụ echichi kacha echichi a na-echi n’ala Igbo iji gosi ọkwa onye ahụ nọ n’ogo ya n’obodo ya, nke na-eweta etu ọhanaeze ga-esi na-asọpụrụ ya dịka omenala na iwu siri dị. Ndị ọzọ bụ ndị na-anọkarị igwe obodo nso. Ọ bụ ha na-agbaziri igwe n’ihe ndị ọ maghị. Ndị bụ ndị ọzọ na-enye aka ịhụ na a na-edowe iwu obodo. Ha na-enyekwa aka ịhụ na obodo na-aga n’ihu. Ọ bụ echichi na-egosi na mmadụ abụrụla ọgaranya, ma zuo oke n’ihe e ji nwoke eme. N’ihi ya, ọ bụ naanị ndị tozuru etozu bụ ndị a na-echi ọzọ.
Etu E si Echi Ọzọ
Ichi ọzọ na-ewe ọtụtụ oge n’ihi ọtụtụ ihe a na-eme oge a na-akwadowe maka ya bụ echichi dịka omenala si dị. tupu e chie nwoke ọbụla ọzọ, ọ ga-agakwuru otu onye maọbụ ụfọdụ ndị e chirila ọzọ, ma jụọ ha ihe niile gbasara ya bụ echichi ọ chọrọ ichi. Ọzọ bụ na ọ ga-eru afọ ole iwu obodo kwuru, ma tulee n’onwe ya ihe ọma ndị o merela n’obodo ya. Onye a ga-echi ọzọ ga-abụkwa onye nwere ezigbo aha n’obodo. Tupu e chie mmadụ ọzọ, a ga-akpọrọ onye maọbụ ndị ahụ a ga-echi ọzọ gaa n’arụsị niile dị n’obodo ahụ, ebe a ga-achunyekwara arụsị ndị ahụ aja. A ga-edukwara ha gazuo ahịa obodo ahụ niile, iji gosi ndị mmadụ ndị ahụ. Ihe a na-akpọ omume nke a bụ ịga ahịa ọzọ maọbụ ịpụ ahịa ọzọ. a na-eme nke a iji gosi ndị mmadụ na onye a a ga-echi ọzọ etozuola ma mezuokwa ihe a chọrọ n’aka ndị a ga-echi ọzọ.
Ịchị ọzọ na-abụ nnukwu emume n’ala Igbo. Tupu e chie mmadụ ọzọ, a ga-ajụ ya ọtụtụ ajụjụ metụtara omenala obodo ya na ndị metụtara ọkwa ịbụ ọzọ. N’abalị na-eso ụbọchị a ga-echi mmadụ ọzọ, a na-eri nnukwu oriri na be onye ahụ a ga-echi ọzọ.
Ụbọchị a ga-echi ọzọ n’onwe ya, ndị a ga-echi ọzọ ga-akwado nke ọma, yiri uwe dị mma, dị ebube ga nọdụ ala n’ama ezumezu n’ebe a kwadooro ha na ndị nwunye ha, ndị na-abụ ndị na-anọdewe ha n’akụkụ. A ga-egbu ọtụtụ ehi, ma sie ụdị nri dị iche iche. Ihe oriri na ihe ọṅụṅụ ga-abụ atụrụ tawa n’ebede (n’ama), na na be ndị a ga-echi ọzọ. Kaosiladị, oge a na-ebido eri oriri bụ ma e chichaa ọzọ. Ọ bụ Igwe maọbụ Onowu na-echi ndị mmadụ ọzọ dịka omenala na iwu ndị siri dị.
Ndị na-anọ ebe a na-echi ọzọ gụnyere ndị ọzọ, ndị ọgọ, ndị enyi, ikwunaibe na ndị obodo gbara obodo ndị na-echi ọzọ gburugburu. Oge e chichaala mmadụ ọzọ, ndị mmadụ na-enye ya ọtụtụ onyinye dị iche iche dịka onyinye ehi, ebule, ewu, ọkụkọ, ji na ego dgz.
Tupu e chie mmadụ ọzọ, ọ na-eji aka ya ahọpụta aha ọzọ ọ ga-aza, nke ndị ọzọ ga-atụle mara ka aha ahụ si dị mma na ma o nweela onye ọzọ na-aza ya bụ aha. Oge a ga-echi ọzọ, onye maọbụ ndị a ga-echi ọzọ ga-esekpuru ala ka e chie ha ọzọ. Oge a na-echi mmadụ ọzọ ka a na-akpọ ya aha ọzọ ọ họọrọ na mbụ n’ihu na na ntị ndị mmadụ. Aha onye ọzọ nwere ike ịza gụnyere (Ọzọ) Ọchịrịọzụọ, (Ọzọ) Omenyịlị, (Ọzọ) Nnanyelugo dgz. Ihe ọzọ a na-eme oge o sekpu ala, a na-echi ya ọzọ bụ ikpunye ya okpu ọzọ, nke bụ okpu mmee a na-etunye ugbene ugo, nyekwa ha nkucha e dere aha ọzọ ya n’elu ya, ma yinyekwa ya eriri ọzọ (akịrị ọzọ). Nke a mecha, igwe ga-agọrọ ya ọfọ maka ọkwa ọzọ ọ banyere na ya. Oge e chichala ọzọ, onye e chiri ọzọ na-agba egwu (ọzọ). Ọ na-agbakwa egwu gagharịa n’ọmaahịa dị iche iche e nwere n’obodo iji gosi ndị mmadụ onwe ya.
Ekike onye chiri ọzọ na-adị ugwu na-adị ebube. Uwe ya na-adị ọgọ. Onye ọzọ na-agbakwa akịrị maọbụ eriri ọzọ na mgbada ogwe ụkwụ ya, na-ekpukwa okpu mmee e tunyere ugbene ugo, makana ugo gbuzuo, ọ chakee. Ọ na-ejikwa ọdụ enyi, na nkucha e dere aha ọzọ ya na ya, na-ejidekwa oji n’aka, na anyakwa akpa ọzọ maọbụ “akapa nwaehi” dịka ndị si asụ. Akpa ụfọdụ ndị ọzọ na-enwe obere mgbịrịmgba nke ga na-ekụtụ ma ha bụ ndị ọzọ na-aga, iji were kwalitekwuo ebube ọzọ ha.
Ihe ndị a chọrọ n’aka onye ọzọ.
•	Ọ bụ ezie na a ga na-enye onye ọzọ nsọpụrụ n’obodo, mana onye ọzọ aghaghị ikwu eziokwu oge niile ka ihe esila dị, nke pụtara na ọ pụghị ịsị asị etu ọ sọrọ ya ihe dị.
•	Onye chiri ọzọ ga-abụ onye dị nsọ
•	Onye ọzọ kwesiri ịbụ onye na-enye aka edozi esemokwu.
•	Onye ọzọ kwesiri ịbụ onye udo.
•	Onye ọzọ na-eso na ndị na-agbaziri Igwe na-achị obodo.
Kaosiladị, n’oge ugbua, ọ dịzi ka ọ bụ onye kpata ego chọọ, e chie ya ọzọ n’agbanyeghi etu omume ya dị. Nke a were na-eweta mmetọ ọkwa echichi ọzọ n’ala Igbo.
Ihe ndị e nwere ike ime onye dara iwu ọzọ
Tupu e chie mmadụ ọzọ, a na-enwe iwu ọzọ, ndị bụkwa iwu ndị a ga-agụrụ ya , ọ nabata tupu e chie ya ọzọ. Nke a mere na ọ bụrụ na onye ọzọ adaa iwu ọzọ, ọ kachasị ma a dọchaa ya aka na ntị maka ịda iwu ndị ahụ ọtụtụ oge, ihe e nwere ike ime bụ:
•	A ga-ekpupu ya okpu ọzọ ma nara ya ikike o ji bụrụ ọzọ obodo ahụ. Onye ga-eme nke a bụ Igwe obodo maọbụ Onowu, n’ihi na ọ bụ ya kpunyere ya okpu ọzọ (chiri ya). A na-eme nke a n’ihu ọha etu e si gbakọ oge e chiri ya ọzọ.
•	A ga-esi n’obodo chụpụ ya dịka iwu obodo si dị.
•	A na-egbukwa ya egbu. Ntaramahụhụ nke a na-adị site n’etu iwu onye ọzọ dara si dị. Ụdị iwu onye ọzọ ga-ada, ga-eme ka a chụpụ ya n’obodo bụ iwu dịka ịdakpo nwunye mmadụ maọbụ ajadụ nwanyị (raping).